Jihadi John oo ka Baxsaday Daacish – Radio Daljir
Luulyo 25, 2015 10:09 b 0
Sabti, Luuliyo 25, 2015 (Daljir)—Jihaadistaha Britishka ee Mohamed Emwazi, laguna naanayso Jihadi John ayaa la sheegay inuu ka baxsaday Dagaalamayaasha Daacish.
Wargeyska The Mirror ee ka soo baxa London ayaa ayaa qoray in Jihadi John oo Daacish ugu qaabilsanaa inuu dadka ka jaro surla ayaa la rumeysan yahay inuu dhowr isbuuc ka hor ka goostay Dagaalamayaasha Daacish.
Ilo-wareed la hadlay Wargeyska Mirror ayaa sheegay inuu Jihadi John baxsad ku yahay gudaha dalka Syria, kadib, markii ay Ciiddamo Khaas ah oo ka kala socda Maraykanka iyo Britain ay gaareen gudaha dalalka Syria iyo Iraq, si ay u soo qabtaan Jihadistahaasi.
Mohamed Emawazi oo 26 jir ah ayaa la rumeysan yahay inuu yahay ninka hagoogan ee Kooxda Daacish u fuliya xukunnadda qoor-goynta, sida laga daawaday Telefishinadda iyo Aaaladaha kale ee Social Media.
Wargeyska waxa uu qoray in laga yaabo in Jihadiste John ku biiray koox yar oo Jihaadiste ah oo ku sugan gudaha dalka Syria, si uu uga badbaado baadi-goobkiisa ka socda guud ahaan Bariga Dhexe.
Wararka qaarkood ayaa sheegayo inuu u baxsaday dalka Libya, si uu ugu badbaado, iyadoo uu ka shakisan yahay in ay Kooxda Daacish xaalladda ku xun tahay.
Jihadi John ayaa la rumeysanyahay inuu dilay Suxufiyiin iyo Shaqaale Samafal oo ay ka mid yihiin Stephen Sotloff, James Foley, David Haines, Alan Henning iyo Peter Kassig.
Dhegeyso:Barnaamijka Caawa iyo Daljir_Axad 26